Macluumaadka Shirkadda-G XIDHIIDHKA XIDHIIDHKA
Hoyga>Nagu saabsan>Profile Company
G STAR waa khabiir sameeya iyo alaab-qeybiye of bir hal abuur leh tin baakadaha iyo xal of tin awooddo mashiinada samaynta si toos ah tan iyo 2010.
Sida sanaadiiqdayada wax lagu soo saaro warshad, Waxaan awoodnaa inaan bixinno weelasha daasadda oo loo isticmaali karo baakadka cuntada, xirmada hadiyadaha xafladda, qurxinta xirmo, reer alaabooyin iyo waxyaabo kale.
Dhammaan maaddooyinka wax lagu daabaco ee sanduuqyada / daasadaha, oo ay ku jiraan wax soo saarka, baakadaha iyo kaydinta, waxay la kulmaan shuruudaha badbaadada cuntada.
Xilligan, waxaan si weyn u sameynaa oo u dhoofinnaa kiisaska daasadaha sida hoos ku xusan:
Daasadda xirmada cuntada:Candy tin sanduuqa, shukulaatada tin sanduuqa, reexaanta kiisaska daasadda, buskud tin sanduuq, buskud tin sanduuq, keega bisha tin sanduuqa, lowska tin sanduuq, shaah tin sanduuqa, qasacad khamri, kafeega tin sanduuq, xawaash daasad, ECT
Daasad xirmo hadiyad ah: Daasadaha kirismaska, Ista tin ukunta, baaldi Istaarka, Maalinta Jacaylka Qasabadaha wadnaha u eg, Maalinta Hooyada tin baakad hadiyad ah iyo wixii la mid ah.
Daasad xirmo qurxiyo: daryeelka maqaarka kala duwan tin xirmo, cadar tin, saliidaha lagama maarmaanka ah tin, maaskaro wajiga tin, daasado iyo nadiifiyeyaasha daasadda, ECT.
Daasadaha guriga ayaa xirxiran kara: bangiga keydinta lacagta daasadda, sanduuqa daasadda shumaca, qalinka kiisaska daasadaha, ciyaarta cayaaraha weelka daasadda, carruurtu alaabta lagu keydiyo daasadda, kabaha sanduuqyada daasadda lagu safeeyo iyo wixii la mid ah.
Iyadoo mmacdanta ka badan 100 waxay dejisaa Mashiinnada Daasadda Tin Box ee kala duwan ee horumarsan, qiyaastii 10 Khadadka wax soosaarka oo otomaatig ah, samee sanduuqyada birta oo dhan tayada deggan iyo gaarsiinta damaanad qaaday.
In ka badan kun oo nooc oo sanduuqa daasadda ah iyo tin baa wasakhaysan si loo daboolo baahiyaha wax soo saar ee macaamiisha loogu talagalay baakadaha sanduuqa daasadda.
Daasaddayada birta ah waxay ka sameyn kartaa mashiinnada mashiinnada, waxaan sameynnaa oo siinnaa mashiinnada jirka birta ah ee birta otomaatigga ah oo tayo sare leh, mashiinnada wax-soosaarka jirka ee biraha si otomaatig ah u qaata, daasadda gacanta lagu xirto mashiinka, mashiinka daasadda daasadda otomaatiga ah, 2 xabbo oo mashiinno ah. daasadaha kale ee la xiriira mashiinada ka baaraandegi kara iyo qalabka daasadda lagu shubo oo ay u dhintaan.
Our mashiinada aad u orod deggan macaamiishayada ugu horeeya dhirta ku dhawaad 10 SANO. Isbarbar dhig kuwa nala tartamaya, waxaan ognahay sida loo sameeyo mashiinno qasacadaysan oo wanaagsan oo hufan, maadaama mashiinnada sanduuqyada daasadaha innaga lafteenna aan samaynay. injineeradeenu waxay in ka badan 15 sano daasad mashiinka khibrad u leeyihiin, waan nahay macangagqalloocan oo kaa caawinaya inaad daasadda daasadda gasho wax soo saarka line.
G XIDIG is had iyo jeer iyadoo kooban oo adeegid ah iyo ku qanacsan yihiin macaamiisha, waxaanan rajeyneynaa inaan noqono dhammaan macaamiisheena la-hawlgalayaasha daacadda ah.